08 January, 2020 in Wararka by Baidoanews Webmaster
Maamulka Koonfur galbeed ayaa laga joojiyay dhowr mashruuc oo balantu ahayd in laga fuliyo magaalada Baydhabo iyo deegaanada kale ee Koonfur galbeed Soomaaliya.
Ilo wareedyo JUGTACULUS ayaa shegey in Lafta gareen Dowladda Federaalka Soomaaliya ay balanta uga baxday Lafta gareen ka dib markii loo diiday mashaariic horay loogu balan qaaday,kuwaas oo lagu horumarin lahaa dadka iyo deegaanka Koonfur galbeed.
Wararka qaar ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu Albaabada ka xirtay Lafta gareen ka dib markii uu ka horyimid qorshaha Dowladda Federaal gaar ahaan doorashada 2021-ka lagu wado iney ka dhacdo guud ahaan dalka Soomaaliya.
Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta gareen) ayaa dhawaan sheegay in dalka aysan xilligan ka qabsoomi karin doorasho qof iyo cod ah oo Madaxtooyada Soomaaliya ay ku dhigan tahay,taas oo caro ka dhex dhalisay Labada Madaxtooyada ee Villa Soomaaliya iyo Koonfur galbeed.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dhegan in dalka ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah,Dowladdana ay qabatay howlo badan oo fududeynaya doorashadaas.